सीमाको रक्षा गर्न पहरा | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
सीमाको रक्षा गर्न पहरा
पप्पु गुरुङ्ग /दोधारा, २४ असोज
माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० जगबुडा नदी नजिक निलो पाल टाँगिएको छ् । पाल भित्र सुत्ने कपडा लत्ता र पानी खानेका बोत्तलहरु छ् । जहाँ सशस्त्र प्रहरीहरु बसिरहेका हुन्छन् । सुत्ने समान सहितको पाललाई हालको लागी अस्थायी पोस्ट भनिएको छ् । पालमा रातीको समयमा ३ जना जती सशस्त्रका जवान बस्छन् । स्थानिय खडक बहादुर बस्नेतले सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच कट्टा जग्गा सहयोग गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले पोष्ट राख्ने सुरसार कसेको हो ।
वस्नेतले माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १०, सुन्दरनगर र गुरुङ्ग टोल बिचमा पर्ने आफ्नो जग्गा सशस्त्रको पोष्टलाई सहयोग गरेका हुन् । जगबुडा नदीको छेउमै केही दिन देखि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो पोष्ट स्थापनाको गर्नको लागी जनप्रतिनिधी र स्थानियहरु संग सहकार्य गर्दै आएको छ् । उक्त स्थानमा बाढको पानी पस्छ । तसर्थ उक्त स्थानको जग्गालाई अग्ल्याउने सुरसारमा पनि सशस्त्र प्रहरी छ् । माहाकाली नगरपालिकाका सीमा भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसंग जोडिएको छ् । माहाकाली नगरपालिकाको सुन्दरनगर र कुतियाकवरका सीमावर्ती क्षेत्रको रेखदेखको लागी अस्थायी निलो पाल टाँगेर रात दिन खटिएका छन् सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरु । साँघुरो कच्ची सडक दायाँ बायाँ धान पाकिसकेको छ् । नजिकै जगबुडा नदी । पाल टाँगेर बनाईएको सशस्त्रको पोष्टको जगबुडा नदी पारी वडा नं. ८ सुन्दरनगर बस्ती छ् । सुन्दरनगर बस्ती नेपाल–भारत सिमा संग गाँसिएको गाँउ हो । पोष्ट निमार्ण क्रममा रहेको उक्त क्षेत्रबाट सिमा क्षेत्रको ‘मुभमेण्ट’ थाहा पाईन्छ् । सीमा सिल र लकडाउनमा अवैध नाकाबाट मानिस नेपाल भित्रिने क्रम नरोकिएपछि सरकारले भारतीय सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट खडा गर्न थालेको हो ।
हालै जग्गा पाएर सशस्त्र प्रहरी पोष्ट निमार्णको लागी सहयोग गर्ने मौखिक छलफल भएको र आगमी दिनमा कार्यपालिका बैठकमा सहयोग सम्बन्धी निर्णय हुने माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले बताएका छन् । ‘सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट निमार्णको लागी हामी गम्भिर छौं’ माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले भने । अस्थायी पोस्टमा परिचालित सशस्त्र प्रहरीहरु चर्को घाममा रुखको छहारी र कतै टेन्टमा ओत लागेर भारतबाट कोही प्रवेश गर्छ, तस्करी हुन्छ कि, भनेर चनाखो साथ बसिरहेका हुन्छन् । माहाकाली नगरपालिकाका सिमा क्षेत्रका सबै स्थानमा बिद्युत सेवा पुगेको छैन् । बिजुली नभएको स्थानमा टर्चका भरमा गस्ती गर्नुपर्छ । रातीको समयमा खुला सिमा क्षेत्रको मुख्य बाटाहरुमा पहरा दिन्छन् ।
माहाकाली नगरपालिकाको खुला सिमा क्षेत्रबाट प्रवेश संगै तस्करी गर्न नपाएपछि खेत तथा जगबुडा नदी तरेर ओहोरदोहोर गरिरहेको गुनासो आएपछि ठाँउ ठाँउमा अस्थायी पोस्ट खडा गरेर निगरानी गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ् । यस अघि माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा २ सुरक्षा वेश थिए । थप २ वटा वेश क्याम्प स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको छ् । जसमा माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० मा जग्गा पाएपछि अस्थायी टहरा निमार्ण
गरि वेश क्याम्प तयारी सुरु भएको छ् । यस्तै वडा नं. ८ मा जग्गा खोजी कार्य अघि बढाईएको माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले जानकारी दिएका छन् । माहाकाली नगरपालिलकाको सिमावर्ती भारतिय बजार बनबासा, नगरा, खटिमा, मेलाघाट, बंगाली कलौनी बजारबाट आवात–जावत गर्ने खुला सिमाका बाटाहरु सशस्त्र प्रहरीले निगरानी गरिरहेका छन् । माहाकाली नगरपालिकाका खुला सिमा क्षेत्रका प्रमुख बाटोघाटोहरुमा थप
सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले बताउदै आएको छ् । सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरैको घर नेपालमा भएपनि आँगन भारतमा जोडिएको छ । सशस्त्र प्रहरी चौबीसै घण्टा सिमा क्षेत्रको सुरक्षार्थ सतर्क रहेको बताईएको छ् ।
माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० का शुरेश गिरीले सशस्त्र प्रहरीले राम्रो काम गरेकाले स्थानीयले साथ दिदै आएको बताए । ‘सिमा क्षेत्रलाई शान्ती बनाउन सशस्त्र प्रहरी तल्लीन छ्’ उनले भने । माहाकाली नगरपालिका संग जोडिएको झण्डै ३२ किलोमिटर नेपाल–भारत सिमा सिल छ् । माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा झण्डै ६५ सशस्त्र प्रहरीका जवान छन् । थोरै जनशक्तीको बावजुत राम्रो काम गर्दै आएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ् । लुकी चोरी आवतजावत हुने स्थानमा अस्थायी पोस्ट स्थापना गरिने तायरी छ् । जहा अहिले आएर चौबीसै घण्टा प्रहरी खटाइएको छ् । वन, नदी र तालका कारण सिमा क्षेत्रमा पहरा दिन समस्या पर्दै आएको छ् । ‘त्यस्ता ठाँउमा पैदल गस्ती गरिन्छ्’ सिमा क्षेत्रमा तैनाथ एक सशस्त्र प्रहरीका एक जवान भन्छन् । अस्थायी पोस्टमा खटिएका प्रहरीका लागि नजिकका स्थायी युनिटले खानाको व्यवस्था गरेका छन् ।
← पाटन नगरपालिका एक हप्ताका लागि सिल
देशलाई भागबण्डामा होइन कानूनमा बाँधौं →